मेडिसिटी अस्पतालमा फोक्सोका क्यान्सर इमेजिङबारे सम्मेलन सम्पन्न – Nepal Press
२०७८ मंसिर १४ गते १६:०६
काठमाडौं । ललितपुरस्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा फोक्सोकोे क्यान्सर इमेजीङ विषयको सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्मेलन अस्पतालको रेडियोलोजी विभाग तथा रेडियोलोजिष्ट संघद्वारा संयुक्तरुपमा आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रमको उद्घाटन अस्पतालका अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो र नेपाल रेडियोलोजीष्ट संघका अध्यक्ष हेन्सन खड्काले गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा देशका विभिन्न अस्पतालबाट रेडियालोजिष्ट तथा रेडियोलोजी आवासिय चिकित्सकहरु गरी कुल ५५ जना सहभागी थिए । रेडियोलोजी विभाग प्रमुख प्राध्यापक डा. रामकुमार घिमिरे वरिष्ठ रेडियोलोजिष्टहरु, फोक्सो विशेषज्ञ, क्यान्सर विशेषज्ञका साथै अन्य विशेषज्ञहरुले आफ्नो प्रस्तुति दिए ।
फोक्सो क्यान्सरको पहिचान, जाँच, र उपचार पछिका मूल्याङ्कन/मापन लगायतका विषय बारेमा छलफल गर्न प्यानल छलफल आयोजना गरिएको थियो । विज्ञहरुले हाल नेपालमा सबैको पहुँचमा पेट (पीइटी) स्क्यान नरहेको अवस्थामा विकल्पका रुपमा पुर्ण शरिरको एमआरआइ गर्न सकिने र यसले रोग पहिचान समयमा नै गर्न सहयोग पु¥याउन सक्ने बताएका छन् ।
प्रकाशित: २०७८ मंसिर १४ गते १६:०६